Nei Uchifanira Kuongorora Bhaibheri? | Bhaibheri Rinombotaura Nezvei
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cambodian Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitumbuka Chiyao Chol Croatian Czech Danish Digor Douala Dutch Efik Estonian Faroese Finnish French Fulfulde (Cameroon) Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Irish Italian Japanese Kabyle Kazakh Kekchi Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Konkani (Devanagari) Konkani (Roman) Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Sorani Kwanyama Laotian Latvian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Marathi Maya Mazahua Mazatec (Huautla) Miskito Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEstonia Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMadagascar Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Navajo Ndonga Nepali Ngabere Nias Norwegian Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Romanian Romany (Southern Greece) Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Udmurt Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Unoziva Bhaibheri here? Pamabhuku ose hapana rakaparadzirwa kupfuura Bhaibheri. Vanhu vane tsika dzakasiyana-siyana vakaona kuti mashoko aro anonyaradza, anopa tariro uye kuti mazano aro anoshanda mukurarama kwezuva nezuva. Asi mazuva ano vakawanda vanongoziva zvishoma nezveBhaibheri. Ungave uchiita zvechitendero kana kuti kwete, zvimwe unoda kuziva nezvaro. Bhurocha rino rakagadzirirwa kukubatsira kuziva pfupiso yezviri muBhaibheri.
USATI watanga kuverenga Bhaibheri, zvinobatsira kuziva zvishomanana nezvekurongwa kwakaitwa bhuku iri. Bhaibheri muunganidzwa wemabhuku 66, kana kuti zvikamu, kutanga naGenesisi richipera naZvakazarurwa uye rinonziwo Magwaro Matsvene.
Mashoko ari muBhaibheri ndeaani? Uyu mubvunzo wakanaka. Chokwadi ndechokuti Magwaro acho akanyorwa nevarume 40 mumakore anenge 1 600. Zvinoshamisa kuti varume ivavo havana kumbotaura kuti ndivo varidzi vemashoko ari muBhaibheri. Mumwe wevanyori vacho akanyora kuti: “Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari.” (2 Timoti 3:16) Mumwe akati: “Mudzimu waJehovha ndiwo wakataura uchindishandisa, Shoko rake raiva parurimi rwangu.” (2 Samueri 23:2) Saka vanyori vacho vakati Jehovha Mwari, Mutongi Mukuru wezvinhu zvose zvakasikwa, ndiye muridzi wemashoko ari muBhaibheri. Vanyori vacho vakabudisa pachena kuti Mwari anoda kuti vanhu vamuzive.
Pane chimwezve chinokosha pakunzwisisa Bhaibheri. Magwaro ose ane dingindira rimwe chete: kurevererwa kwekodzero yaMwari yokutonga vanhu achishandisa Umambo hwake hwokudenga. Mumapeji anotevera, uchaona kuti dingindira iri rinowanika muBhaibheri rose kubva kuna Genesisi kusvika kuna Zvakazarurwa.
Uine zviri pamusoro apa mupfungwa, funga nezvemashoko anowanika mubhuku rinofarirwa kupfuura ose munyika, Bhaibheri.
MASHOKO ANOBATSIRA NEZVEBHAIBHERI
Rakanyorwa mumakore 1 610 kubva muna 1513 B.C.E. kusvika muna 98 C.E. *
Mabhuku 39 ekutanga—akanyorwa zvikurukuru muchiHebheru, nezvimwe zvikamu muchiAramaiki—anozivikanwa seMagwaro echiHebheru, kana kuti “Testamende Yekare.”
Mabhuku 27 ekupedzisira—akanyorwa muchiGiriki—anozivikanwa seMagwaro echiKristu echiGiriki, kana kuti “Testamende Itsva.”
Bhaibheri rakakamurwa kuva zvitsauko nendima. Somuenzaniso, Mateu 6:9, 10 zvinoreva kuti chitsauko chechi6 chebhuku raMateu, ndima 9 ne10.
^ ndima 9 Pane nzira dzakasiyana-siyana dzokunyora misi. Mubhurocha rino, C.E. zvinoreva “Nguva Yavose” uye B.C.E. zvinoreva “Nguva Yavose Isati Yasvika.” Uchaona izvi zvichienzanisirwa nenguva dzezviitiko dziri nechepasi pemapeji.